Home समाचार राजनीति लोडसेडिङ अन्त्य कुलमानले होइन, केपी ओलीले गरेका हुन् : मुख्यमन्त्री पोखरेल
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लोडसेडिङको अन्त्य कुलमान घिसिङले नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गरेको बताएका छन् ।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहको बिहीबार प्युठानमा आयोजित जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
त्यो भूमिकालाई अवमूल्यन गरिकन लोडसेडिङ त कुनै एक जना व्यवस्थापकको व्यवस्थापनको कारण हो भनेर एक प्रकारको मनोविज्ञान तयार गरियो । २५० मेगावाट बिजुली कम भएपछि व्यवस्थापन गरेर बिजुली दिन सकिन्छ ?हो, कुलमानजीले चुहावट नियन्त्रण गरेकै हो । विद्युतभार व्यवस्थापनमा मिहीनेत गरेकै हो । गरेका कुरालाई गरेकै हो भन्नुपर्छ । तर लोडसेडिङ अन्त्यका पछाडि भारतसँग गरिएको प्रसारण लाइन विस्तार र विद्युत खरिद सम्झौता नै मुख्य पक्ष थियो ।
जनताको जीवनमा कष्टको परिरहेको त्यो क्षणको समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री, सजिलो हुन्छ ? नेपालको उर्जा क्षेत्रले विकासका लागि जुन प्रकारको नीति लिएको थियो । निजी क्षेत्रले द्रुतगतिले काम अगाडि बढाउन सकेको थिएन । वनक्षेत्रको जमिन प्राप्त गर्ने कुरादेखि लिएर, जमिन अधिग्रहण गर्ने जस्ता कुराहरूमा अनेकन क्षमलाहरूको सामना गर्नु परिराखेको थियो ।प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओली आईसकेपछि उहाँले कानुनमा सुधार गरिकन । जग्गा प्राप्तिको कुरालाई सरलीकृत गरिदिनु भयो । आज निजी क्षेत्रका जति पनि जलविद्युत आयोजनाहरू छन्, धमाधम निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् । र त्यसले विद्युत् संकट समाधान गर्ने आधार तय गरेको छ ।
Previous articleबत्ती निभाएर, बाकस साटेर प्रचण्डलाई सिराहाबाट जिताइएको खुलासा !!!
Next articleचन्द्रागिरी हिल्सले तोक्यो आईपीओ निष्काशन मिति !!
नयाँ मन्त्रीको सूचीमा गोकुल बास्कोटाको पनि नाम